Diblomaasi Maraykan ah oo lagu xiray magaalada Nairobi & Booliska Kenya oo ka hadlay - iftineducation.com
Diblomaasi Maraykan ah oo lagu xiray magaalada Nairobi & Booliska Kenya oo ka hadlay
iftineducation.com – Booliska wadanka Kenya ayaa xabsiga dhigay diblomaasi ka tirsanaa safaaradda Maraykanku ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Saraakiisha Booliska Kenya ayaa sheegay in la xiray Diblomaasigan ka dib markii uu shil gaari galay, isla markaana uu bastoolad ku cabsi geliyey darawalka gaariga kale, si uu uga baxsado goobta uu ka dhacay Shilka.
Taliyaha Booliska saldhigga dhexe ee Nairobi, Robinson Thuku ayaa u sheegay Wargeyska The Standard in Diblomaasigan oo aan magaciisa la sheegin uu ku lug lahaa shil gaari, isla markaana ay Booliska qabteen, kana qaadeen Bastoolad la sheegay inuu handadaad ku geystay.
Goob joogayaal ayaa sheegay in booliska ay rasaas darandoori ah cirka u rideen markii ay qabanayeen diblomaasigan Maraykanka oo xabsiga la dhigay baaritaanana ay ku socdaan.
Masuuliyiinta safaarada Maraykanka ee magaalada Nairobi ayaa xaqiijiyey xariga diblomaasigan, hase ahaatee faahfaahin kale ma aysan bixin.
Qaar kamid ah Musharaxiintii Madaxweyne ee laga guuleestay iyo Xildhibaano oo qoorta iskula jira
Madaxweyne Farmaajo oo dhambaal ka guddoomay Carlo Campalina +Sawir